Play Store ပေါ်ကနေ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာမရနိုင်တဲ့ app တွေကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲနည်း – DigitalTimes.com.mm
519 Shares 396 Views
Play Store ပေါ်ကနေ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာမရနိုင်တဲ့ app တွေကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲနည်း
အမိုက်စားဂိမ်းတစ်ခု ဒါမှမဟုတ် streaming service app တစ်ခုကိုတွေ့ထားတယ်ဆိုပါစို့။ ဒေါင်းဖို့ Google Play ကိုဝင်တော့မှ “not available in your country” ဒီနိုင်ငံမှာမရနိုင်ဘူးဆိုတာကြီးများပေါ်လာလို့ စိတ်တွေများညစ်ဖူးပါသလား?? Android မှာ ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့နည်းလမ်းကောင်းတွေရှိပါတယ်။ အဲ့ထဲက အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ။်
ပထမဆုံးက VPN ကျော်ဖို့ပါ။ VPN ကျော်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်သုံးသလောက်အလွယ်ဆုံးကတော့ TunnelBear ပါပဲ။
၁။ ပထမဆုံး TunnelBear ကိုဒေါင်းလိုက်ပါ။ TunnelBear တောင်မှ Google Play မှာ “not available” ပြနေတာမို့ တခြား app store တစ်ခုခုကဖြစ်ဖြစ် apkpure တို့ကနေဖြစ်ဖြစ်အရင်ဒေါင်းလိုက်ပါ။
၂. ပြီးသွားရင် app ကိုဖွင့်ပြီး အကောင့်ဖွင့်ပါ။
၃. ပေါ်လာတဲ့မြေပုံရဲ့အပေါ်နားမှာ switch ခလုတ်လေးရှိပါတယ်။ switch လေးကိုဖွင့်ပြီး အောက်နားမှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံရွေးပေးလိုက်တာနဲ့ ဝက်ဝံလေးကအဲ့နေရာကိုသွားလို့ရောက်တဲ့အချိန်ထိ ခနစောင့်ပေးရုံပါ။
၄. Connection request တောင်းလာခဲ့ရင် agree လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
၅. VPN အသစ်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင် “connected” ဆိုတာလေးပြလာပါလိမ့်မယ်။ ကဲဒါဆိုရင်တော့ Google Play Store မှာ ကြိုက်တဲ့ app ( သူ့နိုင်ငံမှာခွင့်ပြုထားတဲ့ app တွေ) ကို ဒေါင်းလို့ရပါပြီ။
ဒါပေမယ့် တစ်ချက်မှတ်စရာကျန်ပါသေးတယ်။ “not available in your country” ပြနေသေးတယ်ဆိုရင် Setting> Apps> Google Play Store ကိုဝင်ပြီး Clear Cache, Clear Data လုပ်ပစ်လိုက်ပါ။ နောက်တစ်ကြိမ်လောက်ထပ်လုပ်ပြီး Play Store ကိုပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ “not available in your country” ဆိုတာပျောက်ပြီး install အေးဆေးလုပ်လို့ရပါပြီ။ တစ်ခါတစ်လေ Google Play မှာကိုယ်လိုချင်တဲ့ app ကိုရှာရင် မဆိုင်တဲ့ ဆင်တူတဲ့ app တွေအများကြီးကျလာပြီး ဘယ်ဟာအမှန်မှန်း ရှာရခက်တာမို့ Google Chrome ကိုဖွင့်ပြီး app နာမည်ရိုက်ရှာ အဲ့ကမှ Play Store ကိုသွားတဲ့လင့်ခ်ကို နှိပ်ပြီးတိုက်ရိုက်သွားတာက ပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆို VPN ကျော်ပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံကိုမပေးတဲ့ ကိုယ့်ဆီမှာမရတဲ့ app တွေကို အားရပါးရဒေါင်းလုပ်ဆွဲလိုက်ရအောင်…
အမိုကျစားဂိမျးတဈခု ဒါမှမဟုတျ streaming service app တဈခုကိုတှထေ့ားတယျဆိုပါစို့။ ဒေါငျးဖို့ Google Play ကိုဝငျတော့မှ “not available in your country” ဒီနိုငျငံမှာမရနိုငျဘူးဆိုတာကွီးမြားပျေါလာလို့ စိတျတှမြေားညဈဖူးပါသလား?? Android မှာ ဒီပွဿနာကိုဖွရှေငျးဖို့နညျးလမျးကောငျးတှရှေိပါတယျ။ အဲ့ထဲက အလှယျဆုံးနညျးလမျးတဈခုကိုဖျောပွပေးလိုကျပါတယ။ျ
ပထမဆုံးက VPN ကြျောဖို့ပါ။ VPN ကြျောတဲ့နရောမှာကြှနျတျောသုံးသလောကျအလှယျဆုံးကတော့ TunnelBear ပါပဲ။
၁။ ပထမဆုံး TunnelBear ကိုဒေါငျးလိုကျပါ။ TunnelBear တောငျမှ Google Play မှာ “not available” ပွနတောမို့ တခွား app store တဈခုခုကဖွဈဖွဈ apkpure တို့ကနဖွေဈဖွဈအရငျဒေါငျးလိုကျပါ။
၂. ပွီးသှားရငျ app ကိုဖှငျ့ပွီး အကောငျ့ဖှငျ့ပါ။
၃. ပျေါလာတဲ့မွပေုံရဲ့အပျေါနားမှာ switch ခလုတျလေးရှိပါတယျ။ switch လေးကိုဖှငျ့ပွီး အောကျနားမှာ ကိုယျကွိုကျတဲ့နိုငျငံရှေးပေးလိုကျတာနဲ့ ဝကျဝံလေးကအဲ့နရောကိုသှားလို့ရောကျတဲ့အခြိနျထိ ခနစောငျ့ပေးရုံပါ။
၄. Connection request တောငျးလာခဲ့ရငျ agree လုပျပေးလိုကျပါ။
၅. VPN အသဈကိုရောကျသှားပွီဆိုရငျ “connected” ဆိုတာလေးပွလာပါလိမျ့မယျ။ ကဲဒါဆိုရငျတော့ Google Play Store မှာ ကွိုကျတဲ့ app ( သူ့နိုငျငံမှာခှငျ့ပွုထားတဲ့ app တှေ) ကို ဒေါငျးလို့ရပါပွီ။
ဒါပမေယျ့ တဈခကျြမှတျစရာကနျြပါသေးတယျ။ “not available in your country” ပွနသေေးတယျဆိုရငျ Setting> Apps> Google Play Store ကိုဝငျပွီး Clear Cache, Clear Data လုပျပဈလိုကျပါ။ နောကျတဈကွိမျလောကျထပျလုပျပွီး Play Store ကိုပွနျဝငျကွညျ့လိုကျရငျတော့ “not available in your country” ဆိုတာပြောကျပွီး install အေးဆေးလုပျလို့ရပါပွီ။ တဈခါတဈလေ Google Play မှာကိုယျလိုခငျြတဲ့ app ကိုရှာရငျ မဆိုငျတဲ့ ဆငျတူတဲ့ app တှအေမြားကွီးကလြာပွီး ဘယျဟာအမှနျမှနျး ရှာရခကျတာမို့ Google Chrome ကိုဖှငျ့ပွီး app နာမညျရိုကျရှာ အဲ့ကမှ Play Store ကိုသှားတဲ့လငျ့ချကို နှိပျပွီးတိုကျရိုကျသှားတာက ပိုအဆငျပွပေါလိမျ့မယျ။ ဒါဆို VPN ကြျောပွီး ကိုယျ့နိုငျငံကိုမပေးတဲ့ ကိုယျ့ဆီမှာမရတဲ့ app တှကေို အားရပါးရဒေါငျးလုပျဆှဲလိုကျရအောငျ…
အဝတ်အစားနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အရောင်ကို စိတ်ကြိုက်ပြောင်းနိုင်တဲ့ လက်ကိုင်အိတ်အမိုက်စားတွေ
Nokia 3(2018) ရဲ့ ကျောဘက်ကိုယ်ထည်ဒီဇိုင်းပုံပေါ်ထွက်လာ